CAANAHA KU JIRA CANAB: TALLAABOOYIN LAGULA DAGAALLAMO XAWAYAANKA BUDADA - CANAB
Waa maxay caarada khatarta ah ee canab, iyo sida loo daaweeyo
Mid ka mid ah cadaawayaasha ugu khatarsan ee canabkiisa waa cayayaanka cudurka fungal. Bannaanka u badan ayaa isku dayey in ay la dagaallamaan cudurkan in ka badan darsin sano, laakiin qof kasta ma guuleysto.
Aan eegno sababaha muuqaalka cudurka oo aad ogaatid sida loola macaamilo.
Sharraxaadda iyo halista jirrada
Qanjada (ama xagta oo cidhiidhi ah) waa mid ka mid ah halista ugu badan ee fungal ee noocyada canabka ah ee Europe. Cudurkan wuxuu ku dhuftay beeraha canabka ah ee England 1834. Waxay u keeneen canab cusub oo ka soo jeeda waqooyiga Ameerika. Muddo gaaban oo ah xummad ayaa ku faafa guud ahaan Yurubta. Burburkii weynaa ee sabirta canabka ah bilowgii qarnigii labaatanaad ayaa sidoo kale ay sabab u tahay muuqaalka kalluunka budada ah.
Waa muhiim! Ururada muusiga oo ka soo jeeda qoysaska Peronosporov oo sababa jeexjeexyada budada ah ayaa loo yaqaan 'oomycetes'.
Meelaha la ogaaday oo la caddeeyey ayaa lagu arkay caleemo caleemo qaba. Caleemaha yaryar waxay sameeyaan dhibco wareegsan oo ah midab casaan ah oo jaale ah, halka caleemo qadiimi ah ay ka soo baxaan dhibco xagal ah oo xididdada ka mid ah. Marka qoyaanka iyo qoyaanka kuleylka diirimaadkiisu bilaabmayaan. Waqti ka dib, qaybta hoose ee caleen, meelaha hoos ku xusan, waxay u egtahay jajab-cad, dhalaalaya dhalaal ah oo ah mycelium. Dhammaan qeybaha kale ee dhirta waxaa loo saameeyaa sidan oo kale: tareemo, antennae, talooyin quraarado, inflorescences iyo canab yar. Inflorescences waxay saameeyeen huruud iyo jajab. Waqti ka dib, way madoobaan oo qallalaan. Beerta jirridda, xajmigaas oo gaaraaya xajmiga digirta, bilaabaan inuu koro brown, ka dibna xoqdo oo u dhintaan (sida miro la yiraahdo "leathery"), ka dib marka infekshanku ma aha mid ku habboon cunista ama samaynta khamriga). Xaaladaha intooda badan, caleemaha cudurka qaba waxay ku dhacaan bilawga, iyo caleemaha ay waxyeeleeyeen way engegeen.
Ma taqaanaa? Edward Tucker - mid ka mid ah saynisyahannadii ugu horeeyay ee isku dayay in ay ka gudbaan xagta uumiga budada ah. Si looga saaro xagta bukaanshaha, wuxuu soo jeediyay in la isticmaalo xal aqueous of kaafi iyo lime biyo.
Si aad "uciso" xagta oo laga soo jaray canab, waxaad u baahan tahay walxo kiimiko ah oo gaar ah, badanaa loo isticmaalo si loola dagaalamo iyo dhir kale.
Sababaha xagta oo bararsan
Jeexjeexka jilicsani wuxuu ka kooban yahay koox fowdo xoqan oo caarad ah, wuxuuna aad ugu dhow yahay caaryaha buluugga ah ee tubaakada, peronospora ee kufsashada iyo duufaanta dambe ee baradho. Isku-dhafashada naasaha labka iyo dheddiga ee hyphae, zoospores ayaa la sameeyay, taas oo ka badan karto caleemaha lakulay canab iyada oo aan wax dhibaato ah gaarin.
Inta lagu jiro xagaaga iyo dayrta goor hore, oospores waxay si firfircoon uga soo baxaan caleemaha saameeya. Waxay leeyihiin derbi aad u dhaadheer, sidaas darteed waxay si fudud u dulqaadanayaan qaboobaha qabow iyo qoyan. Bilowga Abriil, marka ciidda wali qoyan tahay, laakiin heerkulka hawada ee maalintii waa horeba ugu yaraan + 8ºS, zoospores waxay galaan wajiga firfircoon. Waxay abuuraan hal tubbo biji ah, dhamaadka taas oo ay ku jirto hal cayaar oo kaliya. Haddii ay caawinaad ka hesho roobka, dabaysha ama fogaanta this sportangia ku dhaco caleen ah, waxay jebin doonaa qolof ah oo sii daaya in ka badan 60 zoospores.
Burooyinkan yar ee plazma waxay bilaabaan inay u guuraan dhibcood dareeraha iyagoo caawinaya calanka. Marka ay helayaan stomata, waxay sameeyaan tuubo taas oo ku kora gudaha unugyada waxayna keentaa infekshin hoose.
Waa muhiim! Heerkul ah + 26 ... + 27 ºC iyo qoyaan badan, xummadku waxay ku dhici kartaa canab dhan 1 saac.
Nidaamka caabuqa ee caleen caleen caafimaad leh ayaa dhacda ugu dhakhsaha badan heerkul ah + 20 ... +27 º. Xaaladahaas oo kale, sporangia waxay heli doonaan waqti ay ku qaadaan buundada sabiib ah 4-7 saacadood gudahood. Heerkulka hoos ku xusan + 8 ° C iyo wixii ka sarreeya + 30 ° C, sportangia ma gari karo, sidaa darteed infekshin ma dhicin. Iyadoo caawimaadda haustoria, hyphae si dhakhso ah ayey u koraan oo u helaan dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah unugyada sabiibta.
Muddada kabuubistu waxay socotaa 5 ilaa 18 maalmood, iyadoo ku xiran xilliga cimilada iyo xaaladaha cimilada. Natiijo ahaan, dhibco saliid ayaa lagu sameeyaa caleemaha, taas oo muujinaysa waxyeello unugyada geedka canabka ah.
Ma taqaanaa? Bilawga 1854, waxsoosaarka khamriga ee Faransiiska ayaa hoos u dhacay 54 ilaa 10 milyan oo hektolitir (1 hektolit = 100 litir). Cambaareyntii oo dhan waxay ahayd wax xiiri ah oo budo ah, oo burburiyey qayb ballaadhan oo beertayda ah oo ka baxsan xeebta badda Mediterranean.
Xilliga kabuubku wuxuu soconayaa bilawga cayaaraha kubbadda cagta ee garaacaya canab ilaa inta calaamadaha ugu horreeya ee cudurka muuqda. Kadib dhammaystirka, fangasku aad ayuu si adag ugu dhajiyay geedka iyo wuxuu bilaabaa hababka dhalmada. Xaaladaha badankood tani waxay dhacdaa habeenkii marka qoyaanku sarreeyo oo heerkulku aanu ka hooseeynin +12 ºC.
Mustaqbalka, waxaa la sameeyaa dhalaalid cad oo dhalaalaya, kaas oo ah koox weyn oo ka mid ah shimbiraha dhirta oo kale ah. Ovoid sportangia muuqaalka ay u muuqdaan. Muuqaalka ugu yar ee dabaysha, sportangia waxay u duulaan meel kasta.
Si aad u ilaaliso beertaada, waxay kuu noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad wax uga baratid xayawaan, dabacsan, geranium, cannon, jiir dareemayaal, iyo qoryo ku saabsan cudurada iyo cayayaanka.
Marka cimiladu ay qalalan tahay oo kulushahay, waxay si dhakhso ah u dhintaan (qiyaastii 3 maalmood), laakiin haddii ay roobabku u baxaan iyo cagaaraha ku yaallaan caleemaha canabkoo leh dhibcood, waxay isla markiiba ku faafiyaan geedka. Wareegga noocan ah waxaa lagu celin karaa 6-8 jeer xagaaga. Laakiin mar labaad, waxay ku xiran tahay cimilada.
Sida loola tacaalo cudurada canabka
Beeraley badan oo markii ugu horaysay beeraan dhulkooda, ma yaqaanaan sida loo daaweeyo canabka ciirjoogta ah, laakiin waqti isku mid ah ayaa jira laba hab oo waaweyn oo looga takhaluso cudurkan: isticmaalka kiimikada iyo isticmaalka daaweynta dadweynaha.
Inta badan daaweynta xagta uumiga ah waxay isticmaalaan xal of sulphate copper. Wixii buufinta caleemaha waxay sameeyaan xal daciif ah, laakiin haddii ay tahay inaad ku buufiso lignified afkoda, ka dibna isticmaal shaxan ay ka buuxsamayso sulphate copper.
Waa muhiim! Isticmaalka joogtada ah ee kiimikada isku mid ah wuxuu sababi karaa cabudhinta fungus. Sidaa daraadeed, si waxtar leh ugala dagaalamaan cudurkan, laguma talinayo in la isticmaalo hal daroogo in ka badan seddex jeer xilli.
Mashiinka canabka ah wuxuu noqon karaa qaabab:
Bustada ama Bordeaux dareeraha. Xalaalahan waxaa lagu buufin karaa dhammaan qaybaha geedka canabka ah. Wixii diyaarinta ee 1 boqolkiiba Bordeaux isku dar ah, lime macaan (120 g) oo ah copper sulfate (100 garaam) iyo biyo (10 litir) ayaa loo isticmaalaa. Si aad u diyaariso xal seddex boqolkiiba ah, waxaad u baahan tahay inaad qaadato seddex jeer ka badan fitamiin iyo saddex jeer lime badan, 10 litir oo biyo ah. Isku daridda walxo kasta oo la isku daro ayaa sidoo kale la diyaariyey (qadarka maaddooyinka 10 litir oo biyo ah ayaa la xisaabiyaa, iyagoo ogaanaya inta maaddooyinka loo baahan yahay ee xal loo helo 1%). Si aad u diyaargarowdid faahfaahinta saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho ciddiyaha: haddii ciddiyaha uu noqdo casaan marka lagu yareeyo dareeraha diyaarsan, ka dibna xalku waa mid xoogaysan, waxaad u baahan tahay inaad ku darto biyo yar ama lime. Si aad u diyaariso dareeraha 2% burgundy waxaad u baahan doontaa: fitamiin buluug ah (400 garaam), ash soodhaha ah (350 garaam) iyo biyo (20 litir). Si aad u tijaabiso xalka si loogu diyaariyo habboon, waxaad isticmaali kartaa warqad casaan ah. Marka loo yareeyo xalka, waa inay noqotaa casaan.
Copper Chloroxide. Dukaamada khaaska ah waxay iibiyaan 90 boqolkiiba budada la kariyo (40-50 garaam ayaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah iyo lagu buufin karaa canab).
Copper silicate. Si aad u diyaariso xalkan, waxaad u baahan tahay inaad iibsato sulphate copper (2 boqolkiiba) iyo xalka suufka silikil (4 boqolkiiba). Cuntadu waxay u baahan tahay in lagu daadiyo fitamiin iyo isku dhafan (laakiin ma ahan dhinac kale, haddii kale hakad-joojin aan cakirneyn ayaa soo bixi doonta). Ugu dambeyntii, waxaad leedahay dareeraha cagaaran ee mugdiga ah. Tijaabada loogu talagalay waxaa lagu sameeyaa warqad leh fuuqbax. Marka loo yareeyo xalka, waa inay ahaato mid casaan ah.
Ku dhowaad dhammaan diyaargarawyada ku salaysan copper waa caawimaad aad u fiican oo ka soo jeexan, gaar ahaan, iyo guuldarada canab. Xalalka intaa ka badan ayaa la gadaa isla markiiba waa la iibiyaa: "Tsiram", "Zineb", "Kaptan", "Kuprozan", iwm.
Daroogooyinka ku salaysan lime iyo sulfur: "Planriz", "Alirin-b".
Badanaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo buufinta 5 ama wax ka badan inta lagu jiro xagaaga. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in xaaladaha cimilada qaarkood fangaska caanaha si firfircoon u faafiya. Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee sabiib ah ayaa ah Kishmish. Faa'iidooyinka qaarkood waa in ay ku buufiyaan kala duwanaantan noocaan ah 2dii usbuucba inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee Faransiis, xawiraad waxaa laga helay by myologist C. Montana. Wuxuu helay raadkii fangaska ee lagu koriyo ee Versailles ee 1848, ka dib, kaas oo, laba sano gudahood, fangasku ku faafay dhulka Portugal iyo Naples.
Daawee xayrta budada budada budada ah ee daawada dadweynaha. Uma baahnid inaad iibsato kiimikooyin kala duwan, samee xalal adag iyo hubi inaad u urursan tahay. Halkan waxaa ku yaal siyaabo aad ku daaweyn karto hab dhaqameed:
Tincture of ash qoryaha. Diyaarinteeda waxaad u baahan doontaa: 1 kg oo ah ash alwaax iyo 10 litir oo biyo ah. Tincture waxaa lagu hayaa meel mugdi ah muddo 7 maalmood ah. Taas ka dib, waxaad ku buufin kartaa caleemaha canab on labada dhinac. Daaweynta waxaa lagu sameeyaa calaamadaha ugu horeeya ee jirrada. Xalkani wuxuu xoojin karaa asalka dhirta adoo ku shubaya carrada ku wareegsan canabkiisa.
Xalka a permyltenan. On baaldi biyo ah ku dar shaaha oo ka mid ah permiranate iyo ku buufin xal natiijada leh caleemo on dhinaca dambe. Iyadoo ay qoyan yihiin, waxay noqon karaan kuwo budada ah "budo" ka samaysan ash alwaax.
Dill sidoo kale waxaa lagu beeray karaa canab dhan. Waxay ka caawisaa dagaalka ka dhanka ah xagta, iyo in cudurka cudurka - hoos u dhigi tirada daaweynta lagama maarmaanka ah.
Waa in la fahamsan yahay in marka xagta uusku uu ku yeesho canab, daaweynta hababka dadku had iyo goor waxtar ma leh. Xaaladaha adag marka la eego waxay u fiicantahay in ay isla markiiba u rogto kiimikada.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in lagu buufiyo canab inta lagu jiro xilliga ubax ee leh dareeraha Bordeaux oo aad u xoogan (ubaxa waxaa laga yaabaa "gubi"). Xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa boqolkiiba 1.
Tallaabo ka hortag ah
Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ka hortagga cayayaanka waxaa ku jira gooyo jir ah oo geedka canabka ah. Waa la gubay iyadoo caleemo dhacday dayrta. Tani waxay si weyn u yareeyn kartaa halista dib-u-dhac cusub oo guga ah. Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fuliyo daaweynta kiimikada duurka udgoon iyo carrada ku dhow, adoo isticmaalaya xal miro ama naxaas sulfate ah.
Ficilada ka hortagga waxaa ka mid ah dhowr marxaladood oo ka mid ah geed canab ah oo ka soo baxa cayayaanka inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, iyo buufinta si fiican ayaa loo sameeyaa cimilada qalalan. Badanaa waxay ku hawlan tahay wax qabadka bilowga hore ilaa bartamaha xagaaga. Marxaladaha ugu weyn ee maareynta:
Waqtiga ugu wanaagsan wuxuu noqon doonaa mudo ah marka ubuclaha ay yar yihiin. Wixii buufinta iyadoo la isticmaalayo Bordeaux dareere ah 1.5% ama 2%;
Mishiinka labaad ayaa la sameeyaa ka dib markii ubax canab ah. Isticmaal isku mid ah Bordeaux fluid, kaliya yarayn (1 boqolkiiba);
Meelaha saddexaad ayaa la sameeyaa kaddib marka xajmiga canabka ah uu gaaro cabbirka digir yar. Isticmaal xalka isku midka ah ee ku xeeldheer bacda labaad;
Nuujinta ugu dambeysa si loo joojiyo qaadashada 10-12 maalmood ka dib daaweynta saddexaad. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa xal of oxychloride copper (0.4 boqolkiiba). Si aad u diyaarsatid dareeraha noocan ah, waa inaad iibsataa baakad leh budada oxychloride copper (40 garaam). Waxyaabaha oo dhan ee boorsada waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah oo si fiican isku qasan, ka dib markaad bilaabi karto.
Baro wax badan oo ku saabsan manjooyin sida geedaha sida cirifka, khudaarta cagaaran, tufaaxa, cherry, geedo shimbir.
Ka hortagga noocyadani waxay waxtar u yeelan doontaa marka canabka si wanaagsan loo noolaado oo loo gooyo. Xaaladdan oo kale, marka la xoqdo xalka ayaa ku dhici doona caleen kasta, oo baabi'inaysa dhammaan fangaska fungal fungal.
Qandhadu: noocyada canabka ah ee ugu adkaha badan
Wixii tusaale ah oo ka mid ah caabbinta noocyada canabka ah ee cudurada fangasta kala duwan, oo ay ka mid yihiin xagta uumi, miisaan shan dhibcood ah ayaa la soo saaray:
0 dhibcood - buuxa 100% oo ka dhan ah cudurrada oo dhan. Waqtigan xaadirka ah, noocyada noocan oo kale ah ma jiraan, laakiin beeraha Holland ayaa soo sheegay in ay ka shaqeynayaan arrintan, hawsha ugu dhow oo aan macquul ahayn.
1 dhibcood - dhirta ayaa leh difaac sare oo aan ku dhawyahay saameeynta xakamaynta budada ah. Xaaladaha badankood, dhirtaas uma baahna daaweynta cudurada. Qeybtaan waxaa iska leh "Vitis Riparia" - noocyo badan oo canab ah. Laakiin waxay ku koraan kooxo yaryar oo leh yar yar oo buluug ah, sidaas darteed waxtar ahaan looma isticmaalo ujeedo cunto.
2 dhibcood - noocyo u adkaysta oo saameyn ku yeelan kara cimilada qoyan ee muddo dheer. Kadib daaweynyo dhowr ah, xummadku way baaba'ayaan iyadoo aan raad lahayn. Qaybtani waxaa ka mid ah noocyada soo baxa ee soo socda: "Clairette Bulbasa", "December", "Arch". Fiisooyinka Qaar ka mid ah waxay ku siinayaan "Dhexdhexaad" 1.5 dhibcood (laga bilaabo liiska miisaanka ugu macquulsan miiska, waa tan ugu badan ee laga ilaaliyo xagta uumiga budada ah).
3 dhibcood - noocyo iska caabin dhexdhexaad ah waxay u baahan yihiin 2-3 sprays oo keliya oo dhan xilli sii kordhaya. Saddex fasal ayaa helay noocyada soo socda: Bianca, Moldova, Victoria, Augustine, Timur, Arcadia, Talisman, Lora, Danko, Rusmol, Viorica, "Murom", "Riesling Magaracha" iyo kuwo kale.
4 dhibcood - noocyo macquul ah oo u baahan ilaalin gaar ah oo ka imanaya fungus. Duufaantu waxay u baahan tahay 4-5 jeer xilli xilli. Daryeelka aan habooneyn wuxuu kudhintey 25 ilaa 50% dalagga. Qaybtani waxaa ka mid ah noocyo kala duwan: "Rkatsiteli", "Aligote", "Cabernet".
5 dhibcood - noocyo aan lahayn ilaalin kiimikaad timir ah waxay lumin kartaa 50 illaa 100% dalagga. Isla mar ahaantaana geedka gabi ahaanba u dhiman karaa. Noocyada noocan ah waxay u baahan yihiin in la buufiyo 1.5 - 2 toddobaad walba inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Fasallada shanta-dhibcood waxay heleen noocyada soo socda: "Kishmish Khishrau", "Cardinal", "Rizamat".
Ma taqaanaa? Bequerel ficil-nacaybka ayaa sidoo kale ka qaybqaatay abuurista hababka loola dagaallamo burcad. Waxa uu soo jeediyay in uu isticmaalo xal xabbo kolloid ah si uu u burburiyo fungus-ka loo yaqaan "fungus".
Waqtigan xaadirka ah, ganacsatada badankood waxay isku dayayaan inay isticmaalaan noocyo canab leh 2 ama 3 dhibcood. Haddii kale, waxaa jira khatarta dalagga beeraha oo weyn. Isla mar ahaantaana, jinsiyadu waxay sii wadaan inay isku dayaan inay soo saaraan noocyada kala duwan ee canab, "oo heli doona dhibcood" zero, laakiin ma lumin doonaan tayada miiska.